Ana Alcolea. «Okwu na okwu odide juru m anya mgbe m na ede ihe» | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ana Alcolea. «Okwu na ihe odide na-eju m anya ka m na-ede»
Foto. (c) Ndinyene nneme ye mbufiọk
Ana Alcolea bụ onye edemede sitere na Zaragoza nwere ogologo ọrụ ma na nkuzi Asụsụ na akwụkwọ dị ka n'akwụkwọ nke ọrụ ọmụma, literatura nwata na okoro (merie Onyinye Cervantes Chico na 2016) n'ikpeazụ, novelas dị ka N'okpuru ọdụm nke Saint Mark o Achịcha Margarita, nke na-eweta ugbu a. Enwere m ekele maka oge gị, obiọma na nraranye na nke a Ajụjụ ọnụ.
Ana Alcolea. Ajụjụ ọnụ
ANA ALCOLEA: Ikekwe akwụkwọ mbụ m gụrụ bụ Ndị isi atọ ahụ, nke Alexander Dumas dere, na mbipụta ihe atụ maka ụmụaka. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ nke mbụ m na-echeta. Akwụkwọ mbụ m dere bụ Ogwe furu efu, akwụkwọ akụkọ etinye na Afrika, nke nwata nwoke na-achọ medallion nke nna ya yi mgbe ọ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu n'ọhịa.
AA: Akwụkwọ abụọ dị iche iche, Jane eyre, site n'aka Charlote Brönte, maka akụkọ ịhụnanya ya na-enweghị atụ, yana ọdịdị ala ya dị iche na nke m bi na ya. Na Jụọ Alicia, nke e bipụtara dị ka ezigbo akwụkwọ nke otu nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma nke bi n'ụwa ọgwụ ọjọọ. Ọ masịrị m nke ukwuu.
AA: Nke a bụ ajụjụ siri ike ịza. Enwere ọtụtụ ma na-adọrọ adọrọ: site na Homer, Sophocles, Cervantes y Shakespeare a Tolstoy, Herink Ibsen, Sigrid Wepu, Dostoevsky, na Thomas nwoke, Stephan alaka ụlọ ọrụ. Site ugbu a m nọrọ na Juan Marsé, Manuel Vilas, Mauricio Wiesenthal na Irene Vallejo.
AA: A Don Quijote nke La Mancha, nke anyị na-emepụta kwa ụbọchị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-agahie. Ọ bụ agwa na na-achọ ime ka ndụ ya bụrụ ọrụ nka, ihe mara mma maka ya na ndị ọzọ. Ọ chọrọ ịbụ nwa amadi na akwụkwọ edemede na ụbọchị ọ bụla ọ na-echepụta otu ma ọ bụ karịa ihe omume dị egwu ka mma ya wee dịrị ndụ. Na-ebi n'etiti akụkọ ifo na eziokwu, dịka anyị niile na-eme. Cervantes maara ka esi ahụ ma gosipụta ya karịa onye ọ bụla.
AA: Tupu m na-ege opera ide. Ma ugbu a, m na-ede nkịtị nkịtị, akpan akpan ke ini emi, emi ami nkodude ke ndobo ndobo ebiet. Ana m elekwasị anya nke ukwuu ebe obula. Achọrọ m ịmalite ide akwụkwọ akụkọ m na a akwụkwọ ndetu, n'aka. Mgbe ahụ, m na-aga n'ihu na kọmpụta ahụ, mana enwere m obi ụtọ n'oge ahụ nke ịdegharị pen, nwa, n'elu akwụkwọ ahụ ma hụ otu okwu si apụta nke ga-aghọ akụkọ.
Na-agụ, Naanị m na-agụ akwụkwọ. Enweghị m kọmputa iji gụọ akwụkwọ. Ọ na-amasị m ịpịpị ma metụ akwụkwọ ahụ aka. Ya mere amaara m na akụkọ ihe mere eme na-adị mgbe niile. Na ihuenyo ọ ga-adị ka ka ibe ahụ gbanwere, okwu na ihe ha pụtara ga-apụ n'anya.
AA: N'ụtụtụ mgbe ha risịrị nri ụtụtụ na iko tii ka na-agba uda. Ọ bụrụ na m nọ n'ụlọ, m na-ede na ọfis, nwere windo n'akụkụ aka ekpe m. N'èzí ụlọ, ana m edekarị ihe ụgbọ oloko na n'ime ụgbọelu mgbe m na-eme njem.
AL: Gịnị ka anyị na-ahụ na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị, Achịcha Margarita?
AA: Achịcha Margarita bụ a njem gaa ugbu a na n'oge gara aga nke onye protagonist ahụ, onye laghachiri n'ụlọ ezinaụlọ ya tọgbọ chakoo mgbe nna ya nwụsịrị. Ihe ndị a, akwụkwọ akụkọ ahụ, akwụkwọ ndị ahụ na-akpọrọ ya gaa n'oge ọ bụ akụkụ nke ụlọ ahụ, n'ime oge mgbanwe. Ọ bụghị akwụkwọ ọgụgụ isi na oge, ma ọ bụ mmekọrịta ezinụlọ, ọbụnadị na onye protagonist ahụ, onye bụkwa onye nkọwa. Enweghị ndị dike na Margarita tost. Naanị ndị mmadụ. Ma ọ bụ karịa ma ọ bụ naanị ndị mmadụ.
AL: gendị ọ bụla ọzọ na-amasị gị ma e wezụga akwụkwọ akụkọ ihe mere eme?
AA: Ana m agụkarị akwụkwọ mmekọrịta chiri anya karịa akụkọ ihe mere eme. Enwere m mmasị na ndị odide na mkparịta ụka ha na oge ha, nke bụ akụkụ nke ọnọdụ ndụ ha. Agụkwara m abu, n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka m chọta onwe m na ya.
AA: Ana m agụ a biography onye edemede Norwegian Sigrid Undset, nke meriri Nobel Nrite maka Akwụkwọ na 1928. Ana m ede akwukwo enwere ike buru aha ya Ndụ m n’ime ụlọ n'ihi na ebiela m ọnwa asaa dịka ụzọ iri ise nke oge n'ime ụlọ dịpụrụ adịpụ na ugwu, na Norway, na achọrọ m ikwupụta mmekọrịta m na okike: olu nke osimiri ahụ, ntamu nke epupụta nke osisi, mgbanwe nke oge ... Echere m na anyị kwesịrị ibikwu na kọntaktị na mkparịta ụka na okike, na ide akwụkwọ a na-akụziri m ile anya ma gee ntị karịa na mma.
AA: Nke a bụkwa ajụjụ siri ike ịza. Enwere m nnukwu ihe ùgwù n'ihi na ruo ugbu a ebipụtala m ihe niile m dere. Ahụrụ m na enwere ọtụtụ ndị ode akwụkwọ chọrọ ịdepụta ozugbo, na ọsọ ọsọ, nke a bụ ọrụ ị ga-enwe nnukwu ndidi. Ga-ede ọtụtụ. Karịsịa, ị ga-agụ ọtụtụ.
Amalitere m ide ihe mgbe m dị ihe karịrị afọ iri atọ na ise, onye nkwusa izizi m zipụrụ na mbụ achọghị ya. Nke abụọ ee, ya na ya nwere karịa mbipụta 30. Enwere m akwụkwọ nfe gafere ndị mbipụta abụọ na-ebipụtaghị ya, nke atọ bipụtara ya, enwere m obi ụtọ na ya. Ikwesiri ima otu esi eche. Ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ dị mma, ọ na-akwụsịkarị ịchọta ebe ya. Na-emekarị.
AA: Oge bụ na-esiri onye ọ bụla ike, n'ezie. Emeela m ihe okike n'oge a ma edere m ọtụtụ ihe, bụ nke ewebatala isiokwu gbasara ọrịa a na-enweghị na m enweghị ikike mbụ. Mgbe m bidoro n ’akwụkwọ amaghị m ihe ga - eme, a na - eke akwụkwọ ahụ na mgbe ụfọdụ nsogbu ị na - enweghị na mbido gafere.
Ekwenyere m na akwụkwọ akụkọ dị ka ndụ: anyị maara na ọ ga-akwụsị, mana anyị amaghị etu na mgbe. Okwu na odide juru m anya mgbe m na ede ihe. Echere m na nke ahụ dị ezigbo mkpa na akwụkwọ akụkọ m. Margarita juru m anya nke ukwuu mgbe ọ na-ede akụkọ ya Achịcha Margarita. Amụtawo m ọtụtụ ihe banyere ya nakwa banyere onwe m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Anna Alcolea. â€œOkwu na agwa na-eju m anya ka m na-edeâ€
César Pérez Gellida: "O siri ike ịkpata ọrụ site na ọrụ a"
Otu ogidi ọkụ